Safiirkii Talyaaniga u fadhiyay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo askari ilaalo u ahaa ayaa lagu dilay weerar lagu qaaday kolonyo ay la socdeen saraakiil ka tirsan Qaramada Midoobay oo ku sugnaa bariga DRC, sidaana waxaa lagu sheegay bayaan ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Talyaaniga
Kolonyada ayaa la weeraray Isniintii meel u dhow magaalada Kanyamahoro ugu yaraan 10:15 am (08:15 GMT) oo qeyb ka ah isku day afduub, sida laga soo xigtay ilo dhanka amaanka ah.
Safiirka Talyaaniga, Luca Attanasio iyo nin la socday ayaa ladilay, wasaarada arimaha dibada talyaaniga ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay.
Wasaaradda ayaa mar sii horreysay sheegtay in laba qof oo kolonyada ka mid ah la dilay, safiirkiina la dhaawacay. Qofka saddexaad ee la dilay wuxuu ahaa darawal, sida ay sheegeen ilo diblomaasiyadeed.
Ilaa iyo hada lama cadeyn cida ka dambeysa weerarka. Ma jirin cid dusha saaratay masuuliyada weerarka.
“Waa murugo aad u weyn in Wasaaradda Arrimaha Dibaddu ay xaqiijiso geerida maanta ku timid Goma ee Danjirihii Talyaaniga u fadhiyay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Luca Attanasio, iyo boolis ka socday Carabinieri,” ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibedda.
“Safiirka iyo askariga waxay ku safrayeen gaari ay la socdeen kolonyo MONUSCO ah oo ka tirsan howlgalka xasilinta Qaramada Midoobay ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo,” ayaa lagu yiri warbixinta.
Sida laga soo xigtay shabakadda wasaaradda, Attanasio wuxuu ahaa madaxa howlgalka Talyaaniga ee Kinshasa ilaa 2017 waxaana laga dhigay danjire 2019.
Daraasiin kooxo hubaysan ah ayaa ka hawl gala gudaha iyo hareeraha Virunga, oo ku teedsan xuduudaha Congo ay la wadaagto Rwanda iyo Uganda.